जुत्ता लुकाउँदा डम्बर दंग | शहरबाट शब्दहरु
« माओवादी भोजमा आतेजातेलाई काग्रेसको सत्कार
मेरो आफ्नै समाचार ! »
जुत्ता लुकाउँदा डम्बर दंग	आखिर फेरि समयकै कुरा । उही समय फर्किएर आएजस्तै पुराना मित्रहरू एकै थलोमा भेट भयो । डम्बर क्षेत्रीको बिहेको निम्तोमा यस्तो माहौल बनेको हो । परदेश रहँदाका मित्रहरू यसरी भेट हुँदा खुशी लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।
कतारमा बस्दा डम्बर र मेरो ग्रहदशाको योग विपरित थियो । सानोतिनो कुरामा तालमेल नमिल्दा बारम्बार पोलापोल र झगडा भइरहने । आजैपनि गौतम दाजुले भनिहाले, अहिले यहाँ भेट हुँदा खुशी लागेको छ । सबैले खुशीकै कुरा पोखे । आखिर परदेशबाट फर्किएर चारवर्ष पछिको भेट थियो यो ।
केहीदिन अघि मंगलबार निमन्त्रणा बोकेर मलाई खोज्न आइपुगे डम्बर । निकै खुशी लाग्यो । यही खुशीको बदलामा आज यो माहौलमा उपस्थित बनेको हुँ । जय श्रेष्ठ र परिवार, राजेश खड्गी, गौतम दाजु, चन्द्र र मोहनसँग केही घण्टा गफियौं । ललितपुरमा अवस्थित युनिभर्सल ताश एण्ड क्याफे सेन्टरमा । त्यहाँ विवाहको सबै बन्दोबस्ती थियो । उत्तै दुलहा र दुलही आए । वाचा गरे । पूजापाठ भयो । टिकाटालो भयो र साँझ डम्बर विवाहित पुरूषको तक्मा भिरेर फर्किए ।
योजना अनुसार डम्बर ढोरफिर्दीबाट विवाहका लागि जन्ती आएका हुन् । हामीपनि जन्तीकै कोटामा । साँझ एउटा माइक्रो र सान्ट्रो गाडीबाट नयाँ जीवनको प्रारम्भ । मित्र डम्बरले मैयाँ खड्कासँग जीवनयात्रा हाँक्न संयुक्त प्रण गरेका छन् ।
भोजको मध्य समयतिर डम्बरका सालीले उनका जुत्ता लुकाएर सात हजार माग गरे । उनले त्यत्ति रकम दिन मानेनन् । निकै जोडजुलुम गरेर बल्ल एक हजार पाँचसयमा कुरा मिल्यो । उनका सालीले जुक्ता उठाएर सार्वजनिक रूपमा निकै खिल्ली उडाउने काम गरे । हेर्नेले मजाले हेर्दे थिए तर हाम्रा साथी भएका कारण हामीलाई नरमाइलो महसुस भयो ।
दुर्लभ कुरा र भेटको संग्रहलाई तस्वीरमा कैद गर्न मेरो लालसा पुरा भएको छ । परदेशमा एकै कम्पनीमा काम गर्दा र रहँदा सँगै तस्वीर कहिल्यै खिचिएन । तर यस्तो आत्मिय मौका स्वदेशमा आएर जुरेको छ । धन्न दुई वर्ष परदेश बँसाईको चारवर्षपछि यहाँ सँगै तस्वीर खिच्न पाइएको छ । केही तस्वीरहरू यहाँ राखेको छु । परदेशबाट नव विवाहित डम्बर जोडीलाई शुभकामना दिन नभुल्नुहोला हैं ।
पालो मेरै पहिला
भेटघाटमा सबैका आ–आफ्ना कुरा भए । प्रगतिका कुराहरू साटियो । गौतम दाजुले नियमितरूपमा मासिक वा समय मिलाएर यस्तो भेटघाट गरिरहनु पर्ने कुरा उठाए । सबैले सहमति जनाए । पालो कसबाट शुरू गर्ने भन्ने थियो । मित्र चन्द्रको भर्खर बिहे भएको खुशी साट्न उनैबाट भेटघाट हुनुपर्ने कुरा उठ्यो । यद्दपी गोलाप्रथाबाट छान्ने की भन्ने निधो भयौं । मेरो खल्तीको सानो डायरीको पन्ना च्यातेर नाम लेखेँ । त्यसपछि सबैले एक/एकवटा कागजका टुकडा छान्यौं । धत्, पहिला नम्बर मेरो पो आयो । मजापनि नमञ्जापनि । आखिर निम्तोका लागि मेरो तयारीले पहिलो हुनेभयो । लगातारको हिसाबले दोश्रो, तेश्रो, चौथौ, पाँचो र छैठौमा चन्द्र, मोहन, राजेश, जय र गौतम दाजु पर्नुभयो । यसको उद्देश्य भन्नुनै हाम्रो सम्बन्ध र मित्रताको गाँठो दिगो राख्न हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।
फागुन ५, २०६८ तद्नुसार फ्रेब्रुअरी १७, २०१२ शुक्रबार
This entry was posted on फ्रेवुअरी 17, 2012 at 2:57 अपराह्न and is filed under दैनिकी, म र मेरो कुरा. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.
One Comment on “जुत्ता लुकाउँदा डम्बर दंग”
Ghanshyam Says:	फ्रेवुअरी 18, 2012 at 12:02 अपराह्न Oh my dear Subin, I am very much delighted after reading ur good article on marriage ceremony of our Good Friend Mr. Dambar. You have described all the events along with emotions of friendship, I like very much.